को हुन् मन्त्री रामबीर, के छ उनको योजना ? « Khabar24Nepal
को हुन् मन्त्री रामबीर, के छ उनको योजना ?
मंसिर ५, काठमाडौं । नेकपाका नेता एवं काठमाडौं ७ का सांसद रामबीर मानन्धर सहरी विकास राज्य मन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको नेवारी समुदायका नेता मानन्धरलाई मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र निकै चर्चित नेता मानन्धर काठमाडौं(७ बाट दुई पटक सांसद निर्वाचित भएका छन् । मानन्धरले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेला महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका थिए । यस्तै संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा पनि मानन्धरले महत्वपुर्ण भुमिका निभाउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायबाट राजनीति शुरु गरेका मानन्धर काठमाडौं महानगरको वडा नम्वर १६ को वडा अध्यक्ष हुँदै सांसद र मन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका छन् । मानन्धरले कांग्रेस र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवार तत्कालिन मन्त्री बिक्रमबहादुर थापालाई १० हजार बढी मतले पराजित गर्दै संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । मानन्धरले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकताका शुत्राधार बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा पुर्याउनका लागि पद त्याग गर्ने घोषणा गरेर राजनीतिमा त्यागको उदाहरण देखाएका थिए । तर त्यतीबेला नेकपाले गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेन ।
सहरी विकासका विज्ञका रुपमा रहेका मानन्धरले विज्ञता देखाउने मन्त्रालय नै पाएका छन् । स्मार्ट सिटी र सहरी सभ्यता विकासमा जोड दिइरहेको सरकारको सहरी विकास राज्य मन्त्री बनेका मानन्धरका सामु साँस्कृतिक र धार्मीक सहरहरुको सभ्यता जोगाउँदै आधुनिक नेपाल निर्माणमा सहरीकरणलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
मानन्धरले स्मार्ट सिटीको अवधारणा र नयाँ सहरका सम्भाब्यता अध्ययन थाल्ने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक सहरहरुको मौलिकता जोगाउँदै सुविधा सम्पन्न सहरीकरणमा जोड दिने बताएका छन् । ढल,पानी,र टेलिफोनका तारहरु व्यवस्थापन गर्दै धुवाँ र धुलो मुक्त सहर निर्माणमा सरकार लाग्ने मानन्धर बताउँछन् । बिस्तारै सहरी बासिन्दाको सख्या बढीरहेका बेला सम्भाब्य नयाँ सहरहरुको पहिचान र पुर्वाधार निर्माणमा सरकार लागि पर्ने मन्त्री मानन्धर बताउँछन् । काठमाडौंको सामान्य नेवार परिवारमा जन्मीएका मानन्धरले आफू सधैं सामान्य रहँदै जनताको सेवामा तल्लिन हुने बताएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका थप ६ जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि
राष्ट्रिय युवा संघमा जिम्मा पाउने युवा नेतृत्व (पुर्ण पाठसहित)
जिसन नवलपरासीद्वारा स्पिोटर्स मिट २०७६ शुक्रबार सम्पन्न